कसरी मोशाले दासबाट रियालिटीलाई सोधे
मोशा एक हिब्रू (यहूदी) बच्चा थिए जो फुरोहकी छोरी द्वारा स्वीकृत भएको थियो र मिस्रको रूपमा उठाइयो। उहाँ, यद्यपि, उहाँका जराहरू विश्वासी हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म उनले मिश्रित दासत्वबाट आफ्ना मानिसहरूलाई, यहूदीहरूलाई उद्धार गर्छन्। प्रस्थानको पुस्तकमा, तिनीहरु (बलुशहरु) को चक्कु मा एक टोकरी मा छोडिएको छ, तर तिनी कहिल्यै त्यागेनन्।
बुलिसमा मोशाको स्टोरी
प्रस्थान 2: 1-10 मा मोशाको कथा सुरू हुन्छ।
प्रस्थान 1 को अन्त्य सम्म, मिश्रको फिरऊन (शायद रमेश II ) ले यो घोषणा गरेको थियो कि सबै हिब्रू बालकहरु लाई जन्म मा डुबाइयो। तर जब योक, मूसा आमाले जन्म दिए, त्यो उनको छोरालाई लुकाउने निर्णय दिन्छ। केहि महिना पछि, बच्चाहरु लाई सुरक्षित तरिकाले लुकाउन को लागी एकदम ठूलो छ, त्यसैले तिनी तिनीहरुसँग एक पनीदार विकर बास्केटमा राख्ने निर्णय गर्दछ जसले रिजल्टको नेल नदीको छेउमा पछाडि बढाउँदछ (प्रायः ब्रोशस भनिन्छ) , आशा संग त्यो भेट्टाउन र अपनाईएको छ। बच्चाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मोशाको बहिनी मरियम नजिकैको लुकेको ठाउँबाट हेर्छन्।
बच्चाको रोए अलर्टहरू फरुनका छोरीहरू मध्ये एक बच्चा जसले लिन्छ। मूसाकी बहिनी मियाम लुकेको लुगा देख्छ तर बाहिर आउछ जब राजकुमारीलाई बच्चा राख्ने योजना हो। उनले राजकुमारीलाई सोध्छन् भने उसले तिनी हिब्रू दाईलाई मन पराउँछन्। राजकुमारीसँग सहमत छ र यसैले मरियमले वास्तविक आमालाई आफ्नो परिवारलाई नर्स पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ जुन अहिले मिस्र रियायतमा बस्छ।
बाइबिल पास (प्रस्थान 2)
प्रस्थान2(विश्व अंग्रेजी बाइबल)
1 लेवीको घरको एउटा मानिस गए अनि लेवीको छोरीलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा लिइन्।2स्त्रीले गर्भ गरे, र छोरो जन्मायो। जब उनले देखे कि त्यो राम्रो बच्चा हो, उनले तिनलाई तीन महिना लुकाए।3जब उनी उनलाई अब लुकाउन सकेनन्, तिनले उनको लागि प्यापिरस टोकरी लिइन् र ती टार र पिचसँग लिपि गरे। उनले बच्चालाई यो राखे, र नदीको किनारमा रगतमा राखे।4तिनको बहिनी अचानक बन्द भयो, हेर्नको लागि के हुनेछ।
5 फिरऊनकी छोरी नदीमा खसेको थियो। तिनका दाजुभाइहरू नदीको किनारामा हिँडिरहेका थिए। उनले चट्टानको बीचमा टोकरी देखे र उनको हातखुट्टा पठाए।6उनले यो खोले, र बच्चा देखे, र हेर, बच्चा रोए। उनी उनको दयालु थियो र भने, "यो हिब्रूहरूको बच्चा हो।"7त्यसपछि तिनकी बहिनीले फिरऊनकी छोरीलाई भने, "के म जान्छु र हिब्रू महिलाहरूबाट नर्स पुर्याउनेछु कि तिम्रो निम्ति बच्चालाई नर्स गर्न सक्छु?" 8 फिरऊनकी छोरीले तिनलाई भने, "जाओ।" मादी गए र बच्चाको आमालाई बोलायो।9फिरऊनकी छोरीले तिनलाई भने, "यो बच्चालाई छोडिदिनुहोस्, र उसलाई मेरो लागि नर्स गर्नुहोस्, र म तिमीलाई तपाईंको ज्याला दिन्छु।" महिलाले बच्चा लिइन्, र यसलाई न्यानो लाग्यो। 10 उसको बच्चा बढ्यो र तिनले उसलाई फिरऊनकी छोरीलाई ल्याए, र उनले उसको छोरो जन्माइन्। उनले उसलाई मोशा नाम दिए, र भने, "किनभने मैले उसलाई पानीबाट निकालिदिएँ।"
"एक नदीमा छोरो छोरो" कथा मोशालाई अनन्य होइन। यो टाबिसमा रोमुलस र रिमस बायाँको कथामा उत्पन्न भएको हुन सक्छ, वा सिमेरियन राजा सर्गोनको कथामा मैले एफप्रेट्सको एक कष्टयुक्त टोकरीमा छोडें।
ईस्वी देखि सीई: यूरोपीय इतिहास मा सामान्य डेटिंग शर्तें
के नेपोलियन बोनापार्टा साँच्चै छोटो थियो?
प्राचीन मध्य पूर्वका महत्त्वपूर्ण राजाहरू
Sufi - इस्लाम को रहस्यमय
मजेदार काम उद्धरणहरू हा हा हा हो
'तल' मूवी समीक्षा
तपाईं कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
गुणस्तर विद्यालयको शीर्ष 10 विशेषताहरू
शीर्ष 100 पप गीत 2008
मिल्दो स्टीव वन्डरको "अन्धा"
Dakosaurus तथ्य र चित्र
इटालियन शब्दहरू र प्रस्तावहरू सिक्दै
क्रिस्निया ह्युगेसको जीवनी
रोल मा महिलाहरु (र केटीहरु) नेभिल 'द राई मा कैचर'
शिव भजन: 50 भिडियो डाउनलोड
एक शर्टलेस, एनआर-टीटिंग लियोनार्डो डेक्यापियोको यी सम्झनाहरू कहिल्यै नबिर्सनुहोस्
तपाईं हाम्रो कलेजमा के योगदान गर्नुहुन्छ?
मसीही किशोरहरूको जवाफ 'मितिको बारेमा प्रश्नहरू बलात्कार
क्यालिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय - Sacramento प्रवेश
कसरी एक नाटकिक आर्क एक कथा बनाउँछ
तपाईंको चित्रकारी ब्रश जान्नुहोस्: कुर्सियों र ब्रेस्टल्स